च्वांक केटी र बुलेट बाईक मध्ये कसलाई रोजे त नेपाली युवाहरुले ? - Enepalese.com
च्वांक केटी र बुलेट बाईक मध्ये कसलाई रोजे त नेपाली युवाहरुले ?
इनेप्लिज २०७४ साउन ८ गते ७:४१ मा प्रकाशित
नेपालमा महंगा-महंगा मोटरसाइकल चढेर हुइँकिने युवाहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । नेपाली युवाले मोटरसाइकललाई आवश्यकता मात्रै नभएर सौख र सानको साधनको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ। आजकल अधिकांश कम्पनीका महंगा मोटरसाइकल नेपाली बजारमा सजिलै भेट्न सकिन्छ।
प्राय: युवाहरुको सौख र रोजाई विश्वविख्यात ब्राण्ड बुलेट बाइक नै चढ्ने रहेको पाइन्छ । यस्तै युवाहरुको अर्को रोजाई भनेको सुन्दर युवती पनि हुन । युवाहरुको रोजाइमा सुन्दर जिउडाल भएका र आकर्षक युवतीहरु नै पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको बिभिन्न सर्वे मार्फत पनि प्रमाणित भइसकेको कुरा हो ।
पिएनपि रोड सो कार्यक्रममा नेपाली युवाहरुको रोजाइमा पर्ने यी दुई बिषय मध्ये एउटालाई रोज्न पर्दा कुन रोज्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा युवाहरुले कस्तो जवाफ दिए त ?